FBC - Koomishiniin Gamtaa Afriikaa Uummannii fi Mootummaa Itiyoophiyaa qormaatilee isaan mudatan darbuuf ga’umsa akka qaban amantaa akka qabu ibse
Koomishiniin Gamtaa Afriikaa Uummannii fi Mootummaa Itiyoophiyaa qormaatilee isaan mudatan darbuuf ga’umsa akka qaban amantaa akka qabu ibse
Finfinnee, Gurraandhala 14, 2010 (FBC) Koomishiniin Gamtaa Afriikaa uummanni fi mootummaa qormaatilee isaan mudatan darbuuf ga’umsa akka qaban amantaa guutuu akka qabu ibse.
Dura-taa’aan Koomishinii gamtichaa Musaa Faaqii dhimma waayitaawaa Itiyoophiyaa irratti ibsa kennaniin gamtichi haala biyyattii dhiheenyaan hordofaa akka jiru ibsaniiru.
Itiyoophiyaan teessoo Gamtaa Afriikaa qofa osoo hin-taane miseensa barbaachiftuu ta’uushee kan kaasan dura-taa’aan kun, nagaa fi tasgabbiin naannoo akka kabajamu gahee furtuu taphattu malee ajandaaleen ardii akka milkaa’an biyya hojjataa jirtu ta’uushee kaasaniiru.
Itiyoophiyaan wayita ammaa rakkoolee ishee mudatan darbuu fi guddina dame hawaasa dinagdeen galmeessiftu cimsuuf uummannishee fi mootummaan ishee humna akka qaban amantaa akka qaban ibsaniiru.
Mootummaan biyyattii baatii darbe tarkaanfiiwwan waltajjii siyaasaa fi dimookraasii bal’isuuf fudhatee fi isa itti-fufuuf fedhii qabu dinqisiifatanii akka turan ibsi kun eereera.
Qooda-fudhattoonni hundi gochoota nagaa fi tasgabbii biyyattii miidhan irraa of-qusatee itti-gaafatamummaadhaan socho’uu qaba jedhaniiru; nagaa fi tasgabbii malee badhaadhinnis ta’e dimookraasiin akka hin-dhufne eeruun.
Gamtaan Afriikaas biyyoonni miseensi dimookraasii bal’isuufis ta’e misooma fiduuf carraaqii taasisan keessatti rakkoolee isaan mudatan furuuf yeroo mara deggaramuuf qophii ta’uusaa dura-taa’aan kun beeksisaniiru.
Tasgabbaa’uun Itiyoophiyaa nageenya uummataa, fi naannoo isheef darbees Afriikaaf murteessaa ta’uusaa dura-taa’aan kun ibsaniiru.
Gaaffileen kutaalee hawaasaa gara-garaa irraa ka’anis faayidaa Itiyoophiyaa haala eegsiseen mariin, waliigalteen fi kutannoon deebii akka argataniif carraaqileen jalqabaman cimanii itti-fufu jedhanii akka amanan ibsaniiru.
Oduuwwan Biroo « Dh.D.U.O Pireezdaantii Mootummaa FDRI duraanii Doktar Nagaasoodhaaf konkolaataa kenne	Pireezdaant Mulaatuu Pireezdaantii Ikuwaatoriyaal Giinii waliin mari’atan »